Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ZaseTanzania » I-Amazing Tanzania Novelist iklonyeliswe ngomklomelo weNobel Wezincwadi
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Ezintsha • Amasiko • Human Rights • Izindaba • Abantu • Izindaba ZaseTanzania • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Umnqobi weNobel kanye nomlobi wezincwadi waseTanzania u-Abdulrasak Gurnah
Umbhali wamanoveli waseTanzania u-Abdulrasak Gurnah ushicilele amanoveli ayi-10 nezindaba eziningi ezimfishane, eziningi zilandela impilo yababaleki njengoba bebhekana nokulahlekelwa nokuhlukumezeka okubangelwe yikoloniyali laseYurophu ezwenikazi lase-Afrika, into umbhali uqobo aye waphila ngayo. Ubizwe nge-2021 Nobel Prize for Literature.
Ngenkathi esekudingisweni, u-Abdulrasak Gurnah waqala ukubhala njengendlela yokubhekana nokuhlukumezeka ngenxa yokushiya izwe lakubo.
Waba yizwi elibalulekile lokuhlangenwe nakho nomlando we-post European colonialism ezwenikazi lase-Afrika.
Ungumamukeli wokuqala wase-Afrika ukuqokwa emkhakheni weNobel Prize for Literature cishe iminyaka engama-20.
UGurnah wazalwa ngo-1948 eZanzibar. Ngemuva kokukhululwa eMbusweni WaseBrithani ngo-1963, iZanzibar yadlula ekuvukeleni okunodlame okwaholela ekushushisweni kwabantu abambalwa abangama-Arabhu. Ukuba yilungu lalesosizwe esasihlosiwe, uGurnah waphoqeleka ukuba aphephele eNgilandi lapho eneminyaka eyi-18. Kwathi esesekudingisweni lapho aqala khona ukubhala njengendlela yokubhekana nokuhlukumezeka okwakufanele ashiye izwe lakubo.
UNgqongqoshe Wezangaphandle waseJalimane, uHeiko Maas, wakhipha isitatimende ngo-Okthoba 7, 2021, ngesinqumo seKomidi likaNobel sokuklomelisa u-Abdulrazak Gurnah ngeNobel Prize for Literature. Isitatimende sifundeka kanje:
“Ngomlobi waseTanzania u-Abdulrazak Gurnah, akugcini ngokuhlonishwa ngezwi elibalulekile lokwehlelwa kwamakoloniyali, kodwa futhi ungowokuqala owathola umklomelo wase-Afrika kulesi sigaba cishe eminyakeni engamashumi amabili. Kumanoveli akhe nasezindabeni ezimfishane, uGurnah ukhuluma ngomlando wobukoloniyali nemithelela yakho e-Afrika, eqhubeka nokuzenza bazizwe nanamuhla - kubandakanya nendima eyadlalwa ababusi bamakoloni baseJalimane. Ukhuluma ngokusobala ngokungahambisani nobandlululo nokucwasana futhi udonsela ukunaka kwethu ohambweni olungajwayelekile lokuzithandela kodwa olungapheli lwalabo abalwela elinye izwe.
"Ngithanda ukuhalalisela kakhulu u-Abdulrazak Gurnah ngokuwina iNobel Prize for Literature - umklomelo wakhe ukhombisa ukuthi ingxoxo ejabulisayo nesabalele yefa lethu lamakoloni iqhubeka kanjani."
The Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika (i-ATB) waqaphela impumelelo ka-Abdulrasak Gurnah, kanye noMongameli we-ATB u-Alain St. Ange wathi lokhu:
“Siyi-African Tourism Board sihalalisela umbhali wamanoveli waseTanzania u-Abdulrazak Gurnah ngokuklonyeliswa ngo-2021 weNobel Prize for Literature. Uqhakambise i-Afrika. Ngempumelelo yakhe ukhombisa ukuthi i-Afrika ingakhanya nokuthi umhlaba udinga kuphela ukuvula amaphiko omuntu ngamunye wase-Afrika ukuze sikwazi ukundiza. ”
UMongameli weBhodi Yezokuvakasha e-Afrika ubelokhu efuna ukuthi i-Afrika izibhale kabusha indaba yayo futhi akalokothi aphuthelwe yithuba lokuphinda le khwelo, ethi ama-USP abalulekile e-Afrika kunganconywa kangcono ngabantu base-Afrika.
I-ATB iyaqhubeka nokufuna ukuthi i-Afrika ibumbane kakhulu njengoba ilungiselela ukuvulwa ngokuphelele komkhakha wayo wezokuvakasha.
UGurnah njengamanje unguprofesa osafufusa wezifundo zesiNgisi nezamakholomu eNyuvesi yaseKent.
Imikhawulo emisha yokuhamba yezivakashi zaseHawaii
IVenice manje ikhokhisa izivakashi imali yokungena
IATA: Ukukhula Okuqine Kakhulu Kweminyaka Yesigamu Somoya Kusukela ...